ဆန်နီနေမင်း: ဓမ္မမှတ်စု အပိုင်း(၂)
လောက၌ အဆန်းကြယ်ဆုံးသောအရာသည် စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်ကူးထက် ပို၍ဆန်းကြယ်သော အရာသည်ကား ကံတရားဖြစ်သည်။
In this world, the most wonderful thing is intention. More than it’s Kamma.
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 8:51 AM